Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Chikunguru 07, 2021
Vanhu makumi maviri nevasere vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare.
Veruzhinji vokurudzira hurumende kuti nhomba yeCovid-19 iwanikwe muzvipatara zvese munyika kuitira kuti vanhu vabayiwe pavanenge vaenda kunobayiwa nhomba iyi. Izvi zvinotevera kutadza kwaita vanhu kubayiwa nhomba paParirenyatwa, uko kunonzi kuri kubayiwa vanhu mazana mashanu chete pazuva.
Vanhu vakawanda muguta reBulawayo vaswera vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose zvisinei nekuti hurumende yakati yave kudzora matanho akasimba ekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19
Vamwe vashandi vari kuchemachema kuti vamwe varidzi vemakambani ezvizvarwa zvekuChina vari kutyora kodzero dzavo asi hurumende haina zvairi kuita kuvabatsira.
Asi hurumende inoti kana ikapirwa nyaya idzi inokwanisa kuferefeta yotora matanho.
Chizvarwa chekuZimbabwe, VaTafadzwa Chikoto, avo vakasarudzwa kuve kanzura weThrapston mudhorobha reCorby kuBritain muna Chivabvu wegore rino, vanosarudzwa zvakare kuve mutevedzeri wameya wekanzuru yedhorobha reCorby.